यी अभिनेताका श्रीमती के गर्छन ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
१० फाल्गुन २०७४, बिहीबार
भोलिदेखि प्रदर्शन हुने ‘साढे सात’को बुधबार प्रिमियर
आजको सिनेमा ‘चपली हाईट २’
प्रचारमा ब्यस्त ‘पञ्चेबाजा’ टिम
भुत काण्ड र अनलाईनमा केन्द्रित ‘रिसानी माफ’
प्रजातन्त्र दीवसमा ‘ब्रेकफेल’
यी अभिनेताका श्रीमती के गर्छन ?
१८ श्रावण २०७४, बुधबार १८:०६ 19
नेपाली सिनेमामा स्थापीत अभिनेताका परिवारका सदस्यहरुको सिनेमामा प्रबेश त्यति धेरै छैन । जति छ त्यसमा पनि भाई ,छोरो,छोरी, लगाएतका नातेदारहरुको प्रबेश देखिन्छ । केहि अभिनेताका श्रीमान श्रीमती भने यो क्षेत्रमा स्थापीत नाम हरु हुन । अभिनेता हरिहर शर्मा कि श्रीमती सकुन्तला शर्मा अभिनेता भुवन केसीकि पूर्व श्रीमती सुस्मिता बम्जन , श्री कृष्ण श्रेष्ठकि श्रीमती स्वेता खडका, निखिल उप्रेतीकि दोश्रो श्रीमती संचिता लुईटेल र अभिनेता एबं निर्देशक स्वस्तिमा खडकालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । तर यी बाहेक सिनेमामा स्थापीत रचर्चित केहि अभिनेताका श्रीमतीहरु भने फरक पेसा र क्षेत्रमा छन । आज हामीले केहि स्थापीत अभिनेताका श्रमितीका बारेमा चर्चा गर्दै छौ । मधु भट्टराई
महानायक राजेश हमालले ‘युग देखि युगसम्म’बाट सिने करिअरको सुरुवात गरे । त्यसपछि दर्जनौँ सिनेमामा काम गरेर महानायकको ट्याग पाईसकेपछि जीवनको पाँचौ दशकमा उनले बल्ल विवाह गरे । राजेशले मोडल मधु भट्टराईसँग विवाह गरेका छन् । उमेरको अन्तर २० वर्षभन्दा धेरै हुँदा पनि यो जोडीले लगन गाँठो कस्यो । । मधुले मोडलिङ गर्ने क्रममा राजेशसंग भेट भएको थियो । विवाह अघि मोडल मधु विवाह पछि भने वैवाहिक जीवनमा मात्रै सक्रिय छिन् । ९ वर्ष एकअर्काको प्रेममा रहेर राजेश र मधुले विवाह गरेका थिए ।
अभिनेता विराज भट्टकी श्रमिती हुन् सरस्वती भट्ट । सरस्वती कुसल गृहणी हुन् । यसका साथै उनी दुई सन्तान र घरको हेरचाहमा समय बिताउँछिन । सरस्वतीले विराजको करिअर सफल हुन खुबै मेहनत गरेकी छिन् । विराजको सफलतामा सरस्वतीको ठूलो भूमिका छ । सरस्वती घर र दुई छोराको हेरचाहमा व्यस्त छिन् भने विराजलाई भोजपूरी सिनेमाको काम भ्याई नभ्याई छ । विराजले नेपाली सिनेमामा राम्रै नाम र दाम कमाईरहेका बेला भोजपूरी सिनेमामा प्रवेश गरेका थिए ।
भोजपूरी सिनेमामा स्थापित भएपछि विराज गत वर्ष सिनेमा ‘जय परशुराम’बाट नेपाली सिनेमामा कमब्याक भए । उनले यस सिनेमाबाट राम्रो प्रतिकृया र सफलता पाए । यतिबेला उनी नेपाली सिनेमा ‘हर्के राजा’को तयारीमा जुटेका छन् ।
दर्पण छायाँ, बादल पारी, ए मेरो हजुर, लक्ष्मण रेखा, निखिल दाई, जोड िनम्बर एक लगायतका सिनेमामाकाम गरेका अभिनेता दिलिप रायमाझीले नेपाली सिने उद्योगका लागि दर्जनौ सफल फिल्महरु दिएका छन् । दिलिप रायमाझी यतिबेला भने स–परिवार अमेरिकामा छन् । दिलिपकी ,श्रीमती मन्जु रायमाझी हाउसवाईफ हुन् ।
दिलिप र मन्जुकी एक छोरी छिन् – दिव्या । दिव्यालाई केहि निर्देशक र निर्माताले फिल्ममा ब्रेक दिन चाहेको समाचारले गत वर्ष खुबै चर्चा पाएको थियो ।
अभिनेता निखिल उप्रेतीले जीवनमा दुई पटक विवाह गरे । कोपिला निखिलकी पहिलो श्रमिती हुन् । निखिलले पहिलो श्रीमती हुँदा हुँदै सम्बन्ध बिच्छेद नगरकनै अभिनेत्री संचिता लुईँटेललाई विवाह गरेका थिए । निखिलकी पहिलो श्रीमती कोृपिलासंग अहिले पनि सम्बन्ध बिच्छेद भएको छैन । जानकारी अनुसार निखिल दुवै श्रीमतीसंग समय मिलाएर बस्छन् । कोपिलाले झण्डै डेढ वर्ष जति गोपी कृष्ण टि भि फिल्मीको रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालिकाको रुपमा काम गरिन् । तर पछि छोरा पे्टमा आएपछि उनले त्यो काम छाड्नि । अहिले भने उनी छोरा र घरको हेरविचारमै ब्यस्त छिन् । निखिलकी दोस्रो ,श्रीमती संचिता भने छोराछोरी हुर्काएर फेरि सिनेमामा फर्किएकी छिन् । यतिबेला उनी सिनेमा लिलाको प्रचार प्रसारमा व्यस्त छिन् ।
२०७१ साल बैशाख ६ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएको जोडी हो सपना भण्डारी र आर्यन सिग्देलको । सपनासँगको प्रेमले टुसा हाल्दा आर्यन भर्खर आफ्नो करियरबाट सफलता हात पार्दै थिए । एकअर्कालाई नभेटिकनै प्रेम गरेका यी दुईले एकअर्काको काम र व्यस्ततालाई राम्ररी बुझेका छन् । आर्यन अभिनयमा अब्बल छन् भने सपना अध्ययनमा । सपना हाल मानविकी बिषयमा मास्टरस् सकाएर बसेकी छिन् । सपना आधिकारिक रुपमा कुनै अफिससँग जोडिएकी छैनन् । तर उनी आफूलाई हाउसवाईफ भन्न पनि खासै रुचाउँदिनन् । सपना नेपाली अभिनेताका श्रीमतीहरुमा फेशनेवल मानिन्छिन् ।
अभिनेता जीवन लुईटेलकी श्रीमती हुन् अञ्जली शर्मा । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा जीवनसँग फाट्ट फुट्ट देखापर्ने अञ्जली लाईमलाईटमा भने खासै आउन रुचउँदिनन् । अञ्जली र जीवनको २०६४ साल बैशाख २२ गते प्रेम विवाह भएको हो । अञ्जली कुसल गृहणी हुन् । एक छोरा र एक छोरीकी आमा अन्जली अहिले छोरा र छोरी सानै भएका कारण गृहणीमै सिमिक भएकी छिन् । जीवन र अन्जलीले विवाहको ६ बर्षपछि पहिलो सन्तानको रुपमा छोरा पाएका थिए । पहिलो सन्तान १८ महिना पुगेपछि अञ्जलीले दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरीलाई जन्म दिएकी थिईन् ।
दयाहाङ राईका लागि श्रीमती साथी र घर हुन् । गायिका बेनुका राईले दयालाई त्यसबखत साथ दिएकी थिईन् जब उनी सफल अभिनेता बन्ने दौड दौडीरहेका थिए । दयाको करियर सफल बनाउन बेनुकाले आफ्नो व्यावसायिक गायन पेशाबाट बिदा लिईन् । दयासँग भेट हुँदा बेनुका व्यवसायिक गायिका बनिसकेकी थिईन् । तर उनले त्यो कुरालाई बिर्सेर दयाको करियरलाई आफ्नो करियर मानेर अघि बढिन् । उनले व्यवसायिक गायिका बन्नु भन्दा एकेडेमीक गायिका बन्छु भनेर गायन छाडेकी थिईन् । लामो समयको चिनजान र प्रेम पछि उनीहरुको प्रेम विवाह भएको हो । दयाहाङका शब्द रहेका केही गीतमा बेनुकाले आफ्नो स्वर दिएकी छिन् । हाल बेनुका छोरा साम्दुङहाङ ९जसको अर्थ नेपालीमा आर्शिवाद हुन्छ० र घर सम्हालेर बसेकी छिन् ।
अभिनेता रमेश उप्रेतीकी श्रीमती हुन् किरण उप्रेती । किरण हाउस वाइफ हुन् । दजनौं फिल्ममा काम गरिसकेका रमेशको नृत्यको प्रशंसा धेरैले गर्छन् । सिनेमाबाट हराएको लामो समयपछि उनी गतवर्ष सिनेमा ब्रासलेटबाट फर्किएका छन् । उनी निर्मित सिनेमा ऐश्वर्या रिलिजको तयारीमा छ । ,रमेशले करोडपति, पराइघर , एक नम्वरको पाख,े तिम्रो माया ९९ मेरो माया १००, घर संसार, बिद्रोही, अप्सरा, १६ वर्षे जोबान जस्ता सिनेमामा काम गरेका छन् ।
गत वर्षको असार २७ मा अभिनेता विनय श्रेष्ठ विवाह बन्धनमा बाँधिए । अभिनेत्री ऋचा शर्मासँग प्रेममा रहेका विनयले ऋचासँग ब्रेकअप भएपछि एनी थापालाई श्रीमती बनाएर भित्र्याए । तीनवर्ष एकअर्काको प्रेममा रमाएपछि विनय र एनी विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । एनी ब्युटि थेरापिष्ट हुन् । विनयले नेपाली सिनेमा सानो संसार, फस्ट लभ, भिसा गर्ल, रेशम फिलिली गायतका सिनेमामा काम गरेका छन् ।
अन्जली लुईटेलएनी थापाबेनुका राईमधु भट्टराईमन्जु रायमाझीसपना सिग्देल
८ वर्षपछि पर्दामा यस्तो देखिए रेखा र आर्यन
छक्का पन्जा नायीका नम्रता अग्लो श्रीमानको खोजीमा (भिडियो)
धुर्मस–सुन्तली बस्ती निर्माणमा लागे, ‘मेरी बास्सै’ बिग्रियो– साहित्यकार राजेन्द्र…
त्यसबेला २८ बर्षकोे मान्छेलाई बुढो भन्थे — सेवक प्रसाद नेपाल
गीत गाउने र श्रीमती संग केही समय बिताउने सोंच छ— हेमन्त शर्मा
साम्तेन भुटियाको निर्देशन रहेका सिनेमा साढे सातको बुधबार साँझ प्रिमियर गरिएको छ । कुमारी हलमा गरिएको सिनेमाको…
२७ वर्ष लागे पल शाह
गोल्डेन ओक कमेडी यात्रामा मनोज र जितु सहितको टोली